Denmark oo qaxootiga ka mamnuucaysa in ay guryaha ka baxaan | Somaliska
Inta badan baarlamaanka Denmark ayaa taageeray qorshe cusub oo qaxootiga wadankaasi ku nool looga mamnuucayo in ay ka baxaan xeryaha qaxootiga. Qorshahaan ayaa qaasatan ku wajahan dhalinyarada qaxootiga ah, oo lagu soo rogayo bandow. Ujeedada qorshahaan ayaa lagu sheegay in ay tahay in aysan dhalinyaradaan qaxootiga ah aysan kufsan gabdhaha reer Denmark.
Arintaan ayaa ka dambeysay ka dib markii labo wiil oo qaxooti ah lagu eedeeyay in ay kufsi u geysteen gabdho. Qorshahaan ayaa ah mid waali ah oo haddii ay dowlada Denmark ay hirgaliso noqonaya mid nolosha ku adkaynaya qaxootiga.
sidey aniga ila tahay mid waa ku saxan yihiin midna waa ku qaldan wexey ku saxan yihiin in ey ka jawaban oo ey ka dhiidhiyaan anshax xumada iyo tacadiyada dumarka lagula kacayo
mida ey ku qaldan yihiina waa in ey dad aan dembi lahayn xabsi guri geliyaan waxa ka fiicneyd in ey si kale u maareeyaan.